China abụọ extrusion pelletizing igwe emepụta na suppliers | Igwe na-emepụta ihe
Njirimara na Ọrụnke Pellet n'ichepụta igwe:
A na-ejikarị eriri USB na mkpuchi mkpuchi na ọkpọ plastic nke a na-akpọkarị ihe eriri, gụnyere roba, plastik, naịlọn na ụdị ndị ọzọ. halogen cable ihe granulation igwe, wdg.
Atụmatụ nke abụọ ogbo:
Akpa ogbo bụ SHJ ejima ịghasa extruder na-enweghị anwụ. Site na nchikota nke gbọmgbọm na ihe nkedo, onye na-eme ihe ike nwere ike itinye ike ya nke ọma ihe ọkụkụ dị ka ịmị agbaze PVC, na-agwakọta, na-agbasasị ma na-agbadata n'okpuru ọnọdụ ma ọ bụ nrụgide.
Nke abụọ ogbo bụ SJ otu ịghasa extruder. N'ihi ọsọ na-agbagharị ala, ọ nwere ike ịmalite, na-agwakọta ogologo ụzọ ma na-eme ka eriri na-aga n'ihu, na-ezere ikpo ọkụ.
High effciency ịkwanyere plastic pellet eme abụọ ogbo granulation mmepụta akara maka USB na waya
1.mita nri onye na-eri nri 2.vetical na-amanye onye na-eri nri 3.twin screw extruder 4.single screw extruder 5.air-jụrụ pelletizer 6.cyclone 7.
Iru Eru Anyị
Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na-emepụta nke ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe maka agba / agba, na-ejuputa mmepụta masterbatch, yana ngbanwe plastik na ịhazi, ịkpụgharị plastik. Lọ ọrụ siri ike dịka usoro asambodo CE na ISO9001 dị maka njikwa njikwa. N'ezie ị ga-enweta igwe ọrụ ọkachamara na ọrụ njirimara ebe a.
otu degas extruder igwe